Baarlamaanka Puntland oo doortay madaxweyne cusub - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandBaarlamaanka Puntland oo doortay madaxweyne cusub
January 8, 2019 Puntland Mirror Puntland, Puntland Election, Somalia 0
Siciid Cabdullaahi Deni. [Isha Sawirka: Facbook]
Garoowe-(Puntland Mirror) Baarlamaanka Puntland ayaa maanta oo Talaado ah Siciid Cabdullaahi Deni u doortay madaxweynaha cusub.
Deni ayaa helay 35 cod halka musharixii la loolamayay Asad Cusmaan Cabdullaahi uu helay 31 cod intii lagu guda jiray wareega saddexaad ee codbixinta oo ka dhacday xarunta baarlamaanka ee Garoowe, caasimada Puntland, sida uu sheegay guddoomiyaha baarlamaanka Cabdikariim Axmed Maxamed, kaasoo ku dhawaaqay natiijada kama dambaysta ah.
21 xildhibaan oo uu ku jiro madaxweynaha xilka ka tagaya ayaa ka qeybgalay doorashada.
Horey waxa uu u soo noqday wasiirka qorshaynta ee Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Waxa uu badali doonaa Cabdiweli Maxamed Cali oo xukunka yimid bishii Janaayo sanadkii 2014.
Deni ayaa soo dhisi doona golihiisa wasiiradda kahor Janaayo 08-deeda.
January 27, 2019 Siciid Cabdullaahi Deni oo loo caleemo-saaray madaxweynaha Dowladda Puntland
February 16, 2019 Gole Wasiiro oo Cusub, Welise Wax Isbedel ahi ma Muuqdo
10 maleeshiyo oo Al-Shabaab ah oo lagu dilay duqeymo ka dhacay koonfurta Soomaaliya